ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेले के गर्ने के नगर्ने ? थाहा पाउनुहोस्…
August 14, 2020 4663
नेपालीहरुमा ग्यास्ट्रि’कको समस्या अत्यधिक देखिन्छ। हाम्रो जीवनशै’लीमा निश्चित समय तालिका नहुँदा पनि यो रोगका बिरा’मीहरु बढिरहेका छन्। ग्यास्ट्रिकका बिरामीले खानुपर्ने ६ खा’नेकुरा यस्ता छन्। कागती पानी – पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने। यसले ग्यास हटा’उने का’म गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन। खाली पेटमा कागती पानी खा’नाले पेटमा ग्यास कम हुन्छ।
– कार्बोहाइड्रेट कम खाने – पे’टमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राजमा, बन्दा, प्याज’जस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उप’युक्त हुन्छ। – दूध नपिउने – ग्यास्ट्रिक भए’कालाई दूधले फाइदा गर्दैन। पचाउन गाह्रो पर्ने भए’काले दूध नखानु नै बेस हुन्छ। यस’को सट्टा दही र अन्य दूधबाट बनेको परि’कार खानु राम्रो हुन्छ।
-प्रशस्त पानी पिउने – लगा’तार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तु’लन कायम राख्छ। तर पानीको सट्टा कोक, फेन्टा’जस्ता कोल्ड ड्रिङ्कको प्रयोग गर्नुहुँदैन। यसले पेटमा ग्यास बढाउँछ। -लसुन पानी – बिहान उठ्ना’साथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्या’स्ट्रिक भ:एकाहरूलाई फाइदा गर्छ। उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई समेत यसले फाइदा गर्छ।
-खाना सम’यमा खाने – ग्यास्ट्रिक भए’काहरूले सकेसम्म प्रत्येक दुई घन्टाको फर’कमा खाना खाने। लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिएर यसले सम’स्या उत्पन्न गर्छ।
Prevकुखुराको मासुमा पनि भेटियो कोरोना भाइरस… कुन देशमा भेटियो ? हेर्नुहोस्
Nextदिनमा हराउछौं, रातमा हुन्छ र माया ? थर पो सोध्छेउ त जातमा हुुन्छर माया ? (भिडियो सहित)
एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नु’होला]
जन्मिने बित्तिकै अर्को बच्चालाई पनि प्लास्टिकमा पोको पारेर यसरी फ्याँकियो (भिडियो सहित)
आज कुन जिल्लामा कति जना संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्…
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (110328)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (109199)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92287)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91149)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85434)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (80369)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (78378)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (78130)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (72487)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69936)
प्रेमीसँग बन्जी-जम्प गर्न गएकी युवती डो री नबाँधी हाम्फाले-पछि…..
सलमान खान नेपाल नआउने, टिकट भने भइसक्यो बिक्री